काँग्रेस महाधिवेशनको लागि ‘वार्मड अप’ | 24onlinenews | Digital News Paper | डिजिटल पत्रिका
९ श्रावण २०७७ २१:२३
काँग्रेस महाधिवेशनको लागि ‘वार्मड अप’
सिटौलाले खोले सम्पर्क कार्यालय
काठमाडौं । १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु नेतृत्व हत्याउने रणनीतिका साथ ‘वार्मड अप’ शुरु गरेका छन् । नेताहरुको ‘वार्मड अप’ स्वरुप अधिवेशन लक्षित गुटगत भेला केन्द्र देखि गाउँसम्म बाक्लिन थालेको छ । केन्द्रीय नेतृत्व ताकेका नेताहरु मात्र हैन जिल्ला नेतृत्वमा आउन खोज्ने नेताहरु पनि अधिवेशन लक्षित गतिविधिमा लागिसकेका छन् ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले त राजधानीमा सम्पर्क कार्यालय समेत खोलिसकेका छन् । नेतृत्वको दाबी गर्दै शेखर कोइराला, गगन थापा, विमलेन्द्र निधिजस्ता नेताहरुले मिडियाबाजी शुरु गरिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अब ७० वर्ष कटेका नेताहरुले नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्छ भन्दै सभापति देउवालाई पुनः नेतृत्वमा आउनबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
संस्थापन पक्षबाट पुनः नेतृत्व लिने दाउमा रहेका सभापति शेरवहादुर देउवाले आफु हार्ने अवस्था आएमा विमलेन्द्र निधिलाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । पछिल्लो समय निधिले नेतृत्वको दाबी गर्दै महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग छलफल गर्नुलाई देउवाले गरेको तयारीका रुपमा पुष्टि हुन्छ ।
प्रतिपक्षदल कांग्रेस भित्र तीन गुट छ । पहिलो सभापति देउवा पक्ष, दोस्रो वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष र तेस्रो सिटौला पक्ष । साथै, यो पार्टी भित्र प्रभावशाली नेताहरुको थप उपगुट पनि रहेको छ । काँग्रेस भित्रको गुट केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मै मौलाएको छ ।
संस्थापन पक्षभित्र १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको दाबी गर्ने एकमात्र उमेद्वार सभापति देउवानै भए पनि पौडेल पक्षबाट नेतृत्वको दाबी गर्दै महाधिवेशनमा एकढिक्का भएर आए देउवाले निधिलाई अघि सार्ने देउवा निकट स्रोतले २४ अनलाईन न्युजलाई बताएको छ । देउवा गुटभित्र तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमबाट कांग्रेसमा समाहित भएका विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, पुर्णवहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँणजस्ता प्रभावशाली नेताहरु छन् । भ्रष्टाचार मुद्धाले गच्छदार कमजोर भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि धेरै हुने भएकोले गच्छदार यो महाधिवेशनमा पावरमै रहने बताइन्छ । आसन्न महाधिवेशनमा गच्छदार पक्षका दुईसय महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने अनुमान गरिएको छ । उपसभापति समेत रहेका निधि र महामन्त्री खड्का देउवा पक्षको थिङ ट्याङ्कको रुपमा काम गर्ने नेता हुन् । मरिसकेको तरुण दललाई ब्युँताएका खाण देउवा पक्षका अर्का प्रभावशालि नेता हुन् । छनौट भएर आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्य करिब एकसय जना खाँणको पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने अनुमान छ ।
यता पौडेल पक्षमा भने नेतृत्वको दाबी गर्ने नेताहरु धेरै छन् । पौडेलका साथै प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, डा. शेखर कोइराला, डा. सशांक कोइराला मात्र हैन अर्जुन नरसिंह केसी समेत अहिले पौडेल पक्षमा नै अग्रसर भएका छन् । पौडेल पक्षबाट १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्व दावि गर्न ५ वर्ष अघिदेखि गृहकार्य थालिरहेका डा. शेखर कोइराला अघि बढेका छन् । सिटौला पक्षको समेत साथ लिएर अघि बढ्ने रणनीति बनाएका कोइरालालाई सिनियर नेता धेरै भएकोले आफ्नो टिम मिलाउन निकै चुनौती छ ।
यता, कांग्रेसभित्र तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका सिटौला पक्षले राजधानीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर महाधिवेशन लक्षित गतिविधि अघि बढाउँदै र नेतृत्व हत्याउने रणनीति निर्माण गर्न थालिसकेको छ । सिटौला निकट केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागार्इं भन्छन– महाधिवेशनको बारेमा कांग्रेसले तयार गर्नुपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र रणनितिक नीति निर्माणमा व्यापक सरसल्लाह र समन्वय आवश्यक भएकोले सम्पर्क कार्यालय खाले पनि नेतृत्व लिने बारे अहिले निर्णय भैसकेको छैन ।
सिटौलाले क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्र नेतृत्व दावीको बारेमा निर्णय लिने बताउँदै हमागार्इं भन्छन्– अहिले सम्पर्क कार्यालयबाट वर्तमान नेकपा सरकारको गलत क्रियाकलाप र जनसम्पर्कमा बसी व्यापक दबाब सृजना गर्न तथा कोरना महामारीबाट किसान, व्यवसायी र श्रमिकहरुमा परेको आर्थिक भार र मारमा राहतको सहजिकरण गर्न र सरकारलाई दबाब दिन सम्पर्क कार्यालय खोलिएको हो । नेताहरुले जे जस्तो भने पनि सिटौलाको सम्पर्क कार्यालय स्थापनालाई महाधिवेशनको ‘वार्मड अप’ कै रुपमा लिइएको छ ।
सिटौला पक्षभित्र १४औं महाधिवेशनमा ६ सयको हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने अनुमान गरिएको छ । सिटौला पक्षभित्र भिमसेन दास प्रधान, शिवप्रसाद हुमागार्इं, उमाकान्त चौधरी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगाएतका नेताहरु छन् । पछिल्लो समय गगन थापाले आउँदो अधिवेशनमा सभापतिको उमेद्वारी दिन सक्ने बताए पनि यो महामन्त्री बन्ने ‘वार्मड अप’ भएको बताइन्छ ।
आउँदो फागुन ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेको काँग्रेसका केन्द्रदेखि गाउँतह सम्मका नेताहरुको ध्यान पछिल्लो समय क्रियाशील सदस्यता वितरणमा गएको छ । काँग्रेसभित्र गाउँतहदेखि केन्द्रीय तह सम्मको नेतृत्व छान्ने प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । क्रियाशील सदस्य पछि केन्द्रीय नेताहरुको ध्यान महाधिवेशन प्रतिनिधिमा जान्छ । हरेक जिल्लाबाट छनौट भएर आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्छ ।
काग्रेसभित्र वडा समिति, नगर समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्रियाशील सदस्यहरुले नै छनौट गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुले प्रदेशसभा समिति, प्रतिनिधिसभा समिति र जिल्ला समिति निर्वाचित हुन्छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिबाट महाधिवेशन र महासमिति छनौट हुन्छ । यसरी क्रियाशील सदस्यहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रीय समेत नेतृत्व चयन गरेका हुन्छन् ।
महाधिवेशन कार्यातालिका अनुसार असर २५ देखि श्रावण मसान्त सम्म प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नविकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । क्रियाशील सदस्यता बारे भाद्र मसान्त सम्म जिल्ला कार्यसमितिले सूची प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने छ । नयाँ क्रियाशिल सदस्यता वितरण सम्बन्धमा केन्द्रीय छानविन समितिमा उजुरी दिने समय असोज १५ सम्म तोकिएको छ । असोज मसान्तभित्रै केन्द्रीय छानविन समितिले निर्णय लिइसक्नु पर्ने छ भने पुनरावेदनबारेको उजुरी कात्तिक मसान्त सम्म टुङ्गाउनु पर्ने छ । सबै प्रक्रिया सकेर केन्द्रीय सभापतिले प्रमाणित गरेर क्रियाशील सदस्यको अन्तिम सूची मंसिर मसान्तसम्म तयार पार्ने कार्यतालिका छ ।